MUTEMO WEMAZANO PANO Hundeshagen.org - Zvimwe
Kuru Blog Style Varaidzo Macelebs
Hundeshagen Dhijitari Media, LLC d / b / a Hundeshagen Maindasitiri, vanobatana navo uye vanobatsira (iyo 'Hundeshagen' , 'isu' kana 'isu' ) inokoshesa kuvanzika kwevashandisi vedu uye vanyoreri. Isu tinovavarira kuve pachena pamusoro pekuti tinounganidza nekushandisa sei ruzivo rwako, kuchengetedza ruzivo rwako rwakachengeteka uye kukupa iwe sarudzo dzine musoro. Iyi Yakavanzika Policy ( 'Mutemo' ) inotsanangura zvakavanzika maitiro e www.mundodar webhusaiti (iyo 'Saiti' ), iyo iri yavo uye inoshandiswa neHundeshagen. Iyi Bumbiro inoitirwa kuti ikubatsire kuti unzwisise kuti ndeupi ruzivo rwunounganidzwa naHundeshagen, nei tichiuunganidza uye zvatinoita nawo.
Iyo Saiti haina kuitirwa vana vari pasi pemakore gumi nematatu ekuberekwa, uye isu tisingazivi kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kuvana vari pasi pemakore gumi nematatu. Kana tikadzidza isu takaunganidza kana kugamuchira ruzivo rwemunhu kubva kumwana ari pasi pemakore gumi nematatu pasina kusimbiswa kwemvumo yevabereki, tinodzima ruzivo irworwo. Kana iwe uchitenda isu tinogona kuve neruzivo kubva kana kana nezve mwana ari pasi pegumi nematatu, ndapota taura nesu pa zvakavanzika@hundeshagen.org .
Kushambadzira Kutaurirana uye Kugovana neVatatu Mapato. Unogona kugadzirisa zvaunofarira zvine chekuita nekugamuchira kumwe kutaurirana kwekushambadzira kubva kwatiri, uye kugovana kwedu ruzivo rwemunhu wega nevechitatu mapato. Unogona kuzviita nekutibata nesu pa zvakavanzika@hundeshagen.org . Iwe unogona zvakare kusarudza kubva mukugamuchira email kushambadzira kutaurirana, nekutevera iyo 'kuzvinyoresa' mirairo yakapihwa mune yega email yaunogamuchira kubva kwatiri. Iwe unogona zvakare kugadzirisa ako ekushambadzira Notices pane yako nhare mbozha kuburikidza neyako kifaa kana app magadziriro.
California Zvakavanzika Kodzero. California Civil Code Chikamu 1798.83 inobvumidza vashandisi veSiti yedu vagari veCalifornia kuti vakumbire rumwe ruzivo maererano nekuzivisa kwedu kwega ruzivo kune vechitatu mapato kwavo kwakananga kushambadzira. Kuti uite chikumbiro chakadai, ndapota taura nesu pa zvakavanzika@hundeshagen.org .
Cookie Kunobva: Hundeshagen.org
Kuti ubvunze pane chako ruzivo rwatakatora nezvako online kubva kuSiti iyo inoiswa Yakavanzika Policy kana kugadzirisa yakadaro yega ruzivo, unogona titumire email ku zvakavanzika@hundeshagen.org . Iwe unogona kukumbira uye uwane kubviswa kweMubatsiri Wako Mipiro nekutumira tsamba zvakavanzika@hundeshagen.org nechikumbiro chako uye nekutsanangudza iyo yakatarwa Mipiro yeMushandisi yaunotsvaga kubvisa. Isu hatigone kukumbira chikumbiro chekuchinja kana kudzima chero ruzivo kana tichitenda kuti zviito izvi zvinotyora chero mutemo kana zvinodiwa nemutemo kana kukonzeresa kuti ruzivo rwuve rusirizvo. Kubviswa kweMupiro weVashandisi kubva paSiti hakuiti kuti kubviswa kwakazara kana kwakazara kweMipiro yeMushandisi kubva kuSiti sezvo makopi anogona kuramba achionekwa mumapeji akachengetedzwa uye akachengetedzwa kana angangodaro akateedzerwa kana kuchengetwa nevamwe vashandisi veSiti. Iwe unogona kuzvinyoresa kubva kune chero matsamba enhau kana akasiyana emaemail ekushambadzira chero nguva nekudzvanya pane izvo 'kuzvinyoresa' zvinongedzo zvinopihwa mune akadaro kutaurirana. Iwe haugone kubuda mukutaurirana zvine chekuita neSiti, senge kusimbiswa kweakaundi, zvisimbiso zvekutenga uye mameseji ekutungamira, sekureba sekunge iwe wakanyoreswa neSiti.
Zvekuvanzika Kunetseka. Kana iwe uine chero kunetseka kana kunyunyuta nezve zvakavanzika paSiti, ndapota taura nesu kuHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA kana email pa zvakavanzika@hundeshagen.org . Tichaita zvese zvatinogona kuti tikupindure iwe nenzira inokodzera uye nehunyanzvi kuitira kuti upindure mibvunzo yako uye tigadzirise zvinokunetsa. © Hundeshagen Dhijitari Media, LLC. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Purpleclover uye Purpleclover.com zviratidzo zveHundeshagen Digital Media, LLC
arnold naMaria vachiroora futi
Kutitumira tsamba pa: zvakavanzika@hundeshagen.org
Kana iwe uine chero kunetseka kana kunyunyuta nezve zvakavanzika paSiti, nzira dzatinounganidza nekushandisa ruzivo rwako pachako, sarudzo dzako uye kodzero dzako maererano nekushandisa kwakadai, kana unoshuvira kushandisa kodzero dzako pasi pemutemo weCalifornia, ndapota usazeze kutibata paHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Zvemutemo, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, titumire email pa zvakavanzika@hundeshagen.org kana kufona pa1-866-522-5025.
Hundeshagen Dhijitari Media, LLC d / b / a Hundeshagen Maindasitiri, ayo anobatana uye anobatsira ('Hundeshagen', 'isu', 'isu', kana 'edu') anokoshesa zvakavanzika zvevashandisi vedu uye vanyoreri. Isu tinovavarira kuva pachena pamusoro pekuti tinounganidza nekushandisa sei Ruzivo rwako (sekutsanangurwa pazasi), kuchengetedza Ruzivo rwako rwakachengeteka uye kukupa iwe sarudzo dzine musoro. Iyi Yakavanzika Policy ('Policy') inotsanangura zvakavanzika maitiro e www.mundodar webhusaiti (iyo 'Saiti'), iyo iri yavo, uye inoshandiswa, yakazara kana chikamu, naHundeshagen. Iyi Bumbiro inotsanangura kuunganidzwa kwako Ruzivo, mashandisirwo, uye kuburitswa naHundeshagen semutongi wedhata.
Yedu Saiti inogarwa muUnited States. Izvi zvinoreva kuti Ruzivo rwatinotora rucharongedzwa nesu muUnited States, nyika ine mwero wakaderera wekuchengetedza dhata rako pachako kupfuura European Union. Nekudaro, isu patinopa Saiti yedu uye masevhisi kuvagari muEuropean Union, Hundeshagen saka iri zvakare pasi pemitemo yekuEurope yekuchengetedza data, kunyanya iyo EU General Data Protection Regulation (iyo GDPR).
Hundeshagen ari mubishi rekugadza mumiriri weEU uye anokuzivisa iwe kuburikidza neshanduro yakagadziridzwa yePolisi iyi kana mumiriri weEU agadzwa.
Iyo Saiti haina kuitirwa vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu ekuberekwa, uye isu tisingazive kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kuvana vari pasi pegumi nematanhatu. Kana tikadzidza isu takaunganidza kana kugamuchira ruzivo rwemunhu kubva kumwana ari pasi pemakore gumi nematanhatu pasina ongororo yemvumo yemubereki, isu tinodzima ruzivo irworwo. Kana iwe uchitenda isu tinogona kuve neruzivo kubva kana kana nezvemwana ari pasi pegumi nematanhatu, ndapota taura nesu pa zvakavanzika@hundeshagen.org
Tafura iri pazasi ine tsananguro yehukuru hwenzvimbo dzakasiyana siyana dzekugadziriswa kwepamutemo dzinowanikwa pasi peGDPR iyo Hundeshagen inovimba nayo kana ichiunganidza Ruzivo:
Mvumo: kwawakabvuma kushandisa kwedu data rako rega (mune iyo kesi unenge wakapihwa fomu rekubvuma zvine chekuita nechero kushandisa kwakadai uye unogona kubvisa mvumo yako chero nguva nekupa ziviso ku zvakavanzika@hundeshagen.org
Isu tinoshandisa Ruzivo rwatinounganidza kuti tione, kuongorora, uye kudzivirira zviitiko zvinokanganisa mazwi edu ekushandisa, zvinogona kuve zvekunyepedzera, kutyora kodzero, kana mimwe mitemo, kutevedzera zvinodiwa nemutemo, uye kuchengetedza kodzero dzedu uye kodzero uye kuchengetedzeka kwevashandisi vedu. nevamwe. Isu tinogona zvakare kupa yako pachako data kune chero anokwanisa kuwana kana investor mune chero chikamu chebhizimusi reHundeshagen nekuda kwekuwana iko kutora kana kudyara.
Hundeshagen inodzora Ruzivo rwako uye inoonekwa sedhairekita yedata sekutsanangurwa muGDPR. Isu tinogona kugovana uye kuburitsa yakaunganidzwa uye de-yakaziviswa Ruzivo nezve vashandisi vedu pasina kurambidzwa.
Dzimwe nyika dziri kunze kweEEA dzakatenderwa neEuropean Commission sekupa zvidziviriro zvakaenzana seEEA mitemo yekuchengetedza dhata. EU dziviriro yedata mitemo inobvumidza Hundeshagen kuendesa zvakasununguka dhata yega kune dzakadai nyika. Ndapota taura nesu pa zvakavanzika@hundeshagen.org kana iwe uchida kuona kopi yezvidziviriro zvatinoshandisa maererano nekutengeswa kwedata rako rega.
Unogona kugadzirisa zvaunofarira zvine chekuita nekugamuchira kumwe kutaurirana kwekushambadzira kubva kwatiri, uye kugovana kwedu ruzivo rwemunhu wega nevechitatu mapato. Unogona kuzviita nekutibata nesu pa zvakavanzika@hundeshagen.org . Iwe unogona zvakare kusarudza kubva mukugamuchira email kushambadzira kutaurirana, nekutevera iyo 'kuzvinyoresa' mirairo yakapihwa mune yega email yaunogamuchira kubva kwatiri. Iwe unogona zvakare kugadzirisa ako ekushambadzira Notices pane yako nhare mbozha kuburikidza neyako kifaa kana app magadziriro.
Zvekuvanzika Kunetseka . Kana iwe uine chero kunetseka kana kunyunyuta nezve zvakavanzika paSites, ndapota taura nesu kuHundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thPasi, East Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. kana email pa privacy@hundeshagen.org. Tichaita zvese zvatinogona kuti tikupindure iwe nenzira inokodzera uye nehunyanzvi kuitira kuti upindure mibvunzo yako uye tigadzirise zvinokunetsa.
© Hundeshagen Dhijitari Media, LLC. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Hundeshagen neHundeshagen.org zvakanyoreswa mazita emakambani eHundeshagen Digital Media, LLC
'America's Got Talent' yekupedzisira akasungwa achipomerwa mhirizhonga mudzimba
Munin'ina waMick Jagger anozivisa nezve nyaya yeRolling Stones muimbi pamoyo
John Cena naNikki Bella
anoita rob dyrdek ave nemwana
kristin cavallari jay cutler kurambana
arnold schwarzenegger mwanakomana joseph baena
ashley tisdale achiri mwana